Home Wararka Talibaan oo laga cabsi qabo in muddo kooban ku qabsan karaan Caasimadda...
Talibaan oo laga cabsi qabo in muddo kooban ku qabsan karaan Caasimadda Kaabul
Sarkaal ka tirsan Hay’adda Sirdoonka Maraykanka oo la hadlay Wakaalladda Wararka REUTERS ayaa sheegay inay Kooxda Daalibaan awoodi karaan inay Caasimadda Kaabul ku qabsadaan muddo 90 maalmood.
Sarkaalkaasi oo aan fasax u haysanin inuu Warbaahinta la hadlo waxa uu tilmaamay inuu qiimeyntooda ku eegeen muddada dheer ee Kaabul laga difaaci karo Daalibaan, oo guulo degdeg ah gaaray, xilli la filayo inay Ciiddanka Isbahaysiga Maraykanka ka bixi doonaan Afgaanistaan.
Dhinaca kale, Wasiirka Difaaca ee dalka Raashiya, Sergey Shoygu ayaa sheegay inaysan Hoggaamiyayaasha Daalibaan doonaynin inay weeraraan dalalka deriska la ah Afgaanistan ee ay ku soo dhawaadeen.
Wasiirka waxa uu tilmaamay inay Hoggaamiyayaasha Daalibaan ballan-qaadeen inaysan weerari doonin dalalka Tajakistan iyo Uzbekistaan, xilli ay Daalibaan gacanta ku dhigeen Gobaladda ku teedsan Xuduudkaasi.
Previous articleGabar Soomaali ah oo musharaxnimadeeda xildhibaan ku weyday wasiir ka tirsan DF oo lacag u diray
Next articleQamri laga keenay Itoobiya oo lagu qabtay Gobolka Nugaal
Qaybdiid “Hadii aan waqti kordhin la siin RW cusub, dhibkii yimaado...
Bam Gacmeed lagu Weeraray Guri ku yaala Muqdisho oo lagu caweenayay